HAMBALYO!: Leicester horyaallada English Premier League + Sawirro – Gool FM
HAMBALYO!: Leicester horyaallada English Premier League + Sawirro
Raage May 2, 2016
(London) 02 Maajo 2016 – Leicester City ayaa isla geddisey taajka Premier League iyadoo aan xitaa u baahanin inay garoonka u gasho kulamada labada ah ee haray kaddib markii ay Chelsea u qabatay kooxda Tottenham oo ay 2-2 ku celisey.
Kooxda Foxes ayaa hanatay horyaal ay u qalantey oo lkn dad ka yaabis ah maaddaama bilowgii xitaa lagu tirinayay kooxaha heerka 2-aad u noqon doona.
Ka biloow mashiinka gool dhalinta ee Jamie Vardy ilaa taatikada qayrul caadiga ah ee Claudio Ranieri, lagu geeyo caqliga Riyad Mahrez iyo difaactanka naf hurnimada leh Wes Morgan, Leicester waxay muujisey inaysan lacag oo qur ihi ku siin karin libta EPL.
Hambalyo ayaan leennahay.!
Eeg rikoodhadii laga diiwaan geliyey kulankii Chelsea vs Spurs
SAWIRRO XUL AH: Xafladda sanadlaha ee kooxda Man United….(Yaa loo doortay laacibka ugu fiican, sideesa loogu kala guuleystay abaal marinada kale?)